Galgaduud: Ahlu Sunna Waljameeca oo eedayn ujeediyey Dawlada Federalka ( Dhegayso ). – Radio Daljir
Galgaduud: Ahlu Sunna Waljameeca oo eedayn ujeediyey Dawlada Federalka ( Dhegayso ).
Diseembar 19, 2012 8:30 b 0
Guriceel, Dec 19, Dhaq dhaqaaqa Culimada Ahlusunna Waljameeca ee goboladda dhexe ayaa eedayn dusha uga tuuray Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya ee uu hogaamiyo Mudane Xasan Sh Maxamuud.
Sh Ibraahim Xasan Guureeye oo ah Gudoomiyaha sadexda golle ee maamulka Culima’udiinka Ahlusuna Wal Jameeca oo waraysi gaar ah siiyey Radio Daljir ayaa sheegay in Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya ay ka caga jiidayso qorshayaal ay hore iskula meel dhigeen.
Wuxuu sheegay qorshayaashaasi inay kamid ahaayeen, Mushaharka ciidamada, iyo Horumarinta arimaha bulshada ee meelaha ay ka taliyaan Ahlusuna Waljameeca, isagoo tilmaamay in dhamaan arimahaasi ay ka fuli waayeen dhinaca Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya.
Dhinaca kale Sh Ibraahim Xasan Guureeye ayaa ka waramay hindise lagu midaynayo dhinacyo kala duwan oo kawada arimiya goboladda dhexe gaar ahaan Koonfur Mudug iyo Galguduud, Waxaana uu sheegay inay meel wanaagsan arimayaan arimahaasi.
Ahlusuna Waljameeca oo kamid ah dhaq dhaqaaqyada Hubaysan ee ka jira Soomaaliya ayaa ka dhashay dhibaatooyin Kooxda Al-shabaab u geystey shacabka Soomaaliyeed xili ay awood ku lahaayeen Koonfurta Soomaaliya.